သစ်ဆန်းခန့်: Download Link အပျက်များရှိလျင် အသိပေးပါ
သစ်ဆန်းခန့် Website မှ Download ဆွဲမရသော ပျက်နေသော Link သေ နေသော
ဖိုင်များ ရှိပါလျင် ဒီ ပိုစ်အောက်မှာ Comment ပေးခဲ့ကြပါရန်...
တစ်ခြား လိုချင်တာ ရှိရင်လဲ Comment ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်
Thandar LinFebruary 2, 2013 at 3:00 AMI would like to get Huawei U8950D Official Firmware. The links are dead. Thanksalot Bro.ReplyDeletemyint LAyFebruary 2, 2013 at 2:31 PMhttp://www.thitsankhant.com/search/label/iosဒီလင့်ဒ်မပါဘူးဗျာထည့်ပါဦးReplyDeleteAnonymousFebruary 4, 2013 at 11:15 AMU8825D Kernel dload က ဒေါင်းလို့မရပါဘူး ခင်ဗျ ။ Archive is Encrypted or Password Protected. ဆိုပြီး mediafire က ပြနေတယ်။ dropbox ကတော့ Nothing Here The file you are looking for has been deleted or moved. ဆိုပြီး ပြနေတယ်။ ဖြစ်နိူင်ရင် http://d-h.st ကနေပြီး ပြန်တင်ပေးပါလား ခင်ဗျ။ လုံးဝ ဒေါင်းလို့မရလို့ပါ။ReplyDeleteကနောင်သားလေးFebruary 5, 2013 at 5:19 AMကနောင်သားလေးမင်္ဂလာပါအကိုသစ်ဆန်းခန့်ရေကျွန်တော်အကူအညီတစ်ခုတော့တောင်ပရစေNokia306မှမြန်မာဖောင့်ထည့်ချင်လို့ပါအကိုအဲ့ဒီနည်းလေးတင်ပေပါအုန်းနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ReplyDeleteAUNG&#39;S PERSONAL BlOGFebruary 5, 2013 at 8:55 AMအကိုရေဒီခေါင်းစဉ်ကလင့်လေးတွေသေနေပြီအကို U8825D Unlock Code မတောင်းဘဲ Root လုပ်လို့ တက်တဲ့ Error ရှင်းနည်းReplyDeleteChit Thar LayFebruary 5, 2013 at 6:58 PMအဈကိုတငျထားသော Angry Bird6in 1 Pack Download link က part.1 ဘဲရပါသညျ.ကနျြသညျမြားမရပါ.ReplyDeleteThein zawFebruary 5, 2013 at 10:28 PMU8951 ရဲ့ firmware လေး download လုပ်ချင်လို့ down လို့မရလို့ ကူညီပေးပါအုံး ခဗျာReplyDeleteသစ်စန်းခန့်February 6, 2013 at 9:49 PMဟုတ်ကဲ့U8951ကိုမစပါReplyDeleteAnonymousFebruary 7, 2013 at 7:36 AMevasi0n - iOS 6.x Jailbreak this download link not workReplyDeleteAnonymousFebruary 9, 2013 at 11:00 PMsave the titanic gameတင်ပေးပါခင်ဗျာ။ ထာဝရလေးစားလျက်••••••••••ReplyDeletesawnyi.mkFebruary 11, 2013 at 5:48 AMအကို ရေ talking caller id ဆိုတဲ့ ပိုစ့်မှာလင့်ပျက်နေပါတယ် ကျနော် ခဏလေးဝင်လက်ကမြင်းခဲ့ပါတယ် ReplyDeleteYe Min HtetFebruary 15, 2013 at 8:48 PMPhone Headphone ကနေ သီချင်းကျော်တာ၊ရပ်တာ တွေ လုပ်လို့ ရမဲ့ ။Function စုံစုံ အသံထွက်ကောင်းကောင်း music player အလန်းလေးတင်ပေးပါလား၊Thanks A lotReplyDeletePaing SaingFebruary 21, 2013 at 12:00 PMu8825 no unlock code link are dead... both ( Mediafire & Dropbox )pls check ......thank you.... :)ReplyDeletethuraFebruary 23, 2013 at 9:05 AM http://www.mediafire.com/?qgoztx21n905p2wကလင့်ပျက်နေတယ်ထင်တယ်ဒေါင်းလို့မရဘူး G510 root လုပ်တာReplyDeleteAnonymousFebruary 23, 2013 at 10:28 PMအကို android gameထဲက pes 2012(android)က mediafire download link ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါဦး။download လုပ်လို့မရလို့ပါ။ReplyDeletemin maharFebruary 28, 2013 at 9:15 PMတရုပ်တကဘလပ်ဒေါင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အကိုရေReplyDeleteAnonymousMarch 3, 2013 at 1:28 AM gpk installer for android link လေးတစ်ချက်လောက်စစ်ပေးစေချင်ပါတယ်ReplyDeleteအိမ်မက်ဆိုးမှမနိုးတဲ့သူMarch 3, 2013 at 5:39 AMonda 4.1.1 link ကနှိပ်လို့မရဖြစ်နေပါတယ် ခင် ဗျာ လေးစားစွာဖြင့်ReplyDeleteAnonymousMarch 4, 2013 at 9:57 AMp 1ဂိမ်းဆောချင်တာဒေါင်းမရဘူး ကူညီပေးပါReplyDeleteAnonymousMarch 6, 2013 at 4:53 AMအကို townsmengame က download မရလို့ပါ။ကူညီပေးပါဦးReplyDeleteAnonymousMarch 6, 2013 at 7:16 PM 4.0.2.A.0.42 - http://www.mediafire.com/?hevz3x5w9pqt24qsony xperia mini pro အဲ​ဒီ​လ​င့်​ ( ခ် )ေ​လးပျ​က်ေ​န​လို့​ အကိုြ​ပ​န်ြ​က​ည့်ေ​ပး​ပါ​အု​န်းေ​နာ် အကိုReplyDeleteAnonymousMarch 8, 2013 at 9:58 PMHuawei T8620 Root Zip file ကဒေါင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်...ReplyDeleteUnknownMarch 12, 2013 at 8:53 PMHuawei ဖုန်း ၁၈လုံး Recovery သွင်းလို့ ရမဲ့ All In One Custom Recovery Tool Kit link is dead . can not download. pls repairReplyDeleteAye MawMarch 17, 2013 at 12:50 PMအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ReplyDeleteye lltoeMarch 18, 2013 at 6:32 AMSamsung Gio S-5660 firmware လိုချင်လို့ပါခင်ဗျာ...Link က အလုပ်မလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အကိုရေ..ကူညီပါဦးReplyDeleteZayyarMarch 20, 2013 at 2:51 AMhttp://www.huaweidevice.com/cn/disabledT8620 ICS Firmware လင့်ကအကိုသေနေတယ်ဗျ ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးပါဦးနော်ကျေးကျေးနော်အကို စောင့်နေမယ်အကိုReplyDeleteHtun Lin AungMarch 21, 2013 at 10:36 PMအကိုရေtalking caller ID app လင့်ကဖွင့်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကူညီပါဦးနော်ReplyDeleteAung Su Mon (Mobile)March 23, 2013 at 10:58 PMhttp://www.thitsankhant.com/2013/02/huawei-recovery-all-in-one-custom.html?showComment=1364104492637#c3768001979524293850 ( File Not Found ) Please check ...... ReplyDeleteyan_yanMarch 25, 2013 at 8:55 AMအစ်ကို .. ကျွန်တော် ဘယ်မှာရေးရမှန်းမသိလို့ ဒီမှာပဲရေးလိုက်ပါတယ်...ကျွန်တော်ကိုင်တဲ့ဖုန်းက s2 thaiwan ပါ... ဝယ်တုန်းကတော့အစစ်ကိုဝယ်တာပါပဲ နောက်မှ အတုမှန်းသိရတာ.. Root လဲလုပ်လို့မရဆိုတော့ မြန်မာ ဖောင့်လဲ မမြင်ရပါဘူး... Root လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးရှိရင်ပြောပြပါလားဗျာ... အရင်ကတော့ google မှာရှာတာ လုပ်လို့ရတဲ့နည်းရှိတယ်.. ဒါပေမယ့် သူပြောသလို အဆင်ဆင့်မလုပ်တတ်ဘူးဖြစ်နေတာ... ကူညီပါဦးအစ်ကို.. လေးစားလျှက်...ReplyDeletephyowa thanApril 1, 2013 at 10:58 PMအကို ရေ တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ I HaweiU8825D AntiVirus ရွေးတာ ခေါင်းစားနေပြီး Kaspersky ကတစ်မျိုးဖမ်းတယ် AVG ကတစ်မျိုးဖမ်းတယ် Avart! က တစ်မျိုးဖမ်းတယ် DR,WED ကတစ်မျိုး ရှပ်နေတာပဲဗျာဘာကိုရွေး ရ မှန်းမသိတော့လို့ တစ်ခုပြီးတစ်ခု စမ်းသုံးပြီးပြီး အကြံလေးပေးပါ ဦး ဗျာ phyowathan1994.ReplyDeletephyowa thanApril 1, 2013 at 10:59 PMအကို ရေ တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ I HaweiU8825D AntiVirus ရွေးတာ ခေါင်းစားနေပြီး Kaspersky ကတစ်မျိုးဖမ်းတယ် AVG ကတစ်မျိုးဖမ်းတယ် Avart! က တစ်မျိုးဖမ်းတယ် DR,WED ကတစ်မျိုး ရှပ်နေတာပဲဗျာဘာကိုရွေး ရ မှန်းမသိတော့လို့ တစ်ခုပြီးတစ်ခု စမ်းသုံးပြီးပြီး အကြံလေးပေးပါ ဦး ဗျာ phyowathan1994.ReplyDeleteAnonymousApril 3, 2013 at 5:23 AMအကို CONTRACT KILLER ဒေါင်းလို့ မရဘူး 404 page not found ဖြစ်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ....PLEASE!!!!!!!!!!ReplyDeleteAnonymousApril 10, 2013 at 2:04 AMhttp://d-h.st/3Iuအစ်ကိုရေဒါလေးမရဘူးခင်ဗျReplyDeleteAnonymousApril 18, 2013 at 11:05 PMi would like to download jelly bean for glaxy tab27.0 .but i can't.please reply me \_ReplyDeleteMg HtutApril 21, 2013 at 8:20 AMGpk installer download link and CWM recovery for Huawei download link is dead .. please helpReplyDeleteShatt LannApril 24, 2013 at 5:40 AMAll In One Custom Recovery Tool Kit အတွက် http://d-h.st/sjs ဒီလင့်က ပျက်နေလို့ လင့်ရှိရင် ထပ်တင်ပေးပါဦးReplyDeleteAnonymousApril 28, 2013 at 5:22 AMgpk installer site is deadReplyDeleteAnonymousApril 29, 2013 at 10:27 AMFIFA 2012ပြန်တင်ပေးပါးအုံးReplyDeleteAnonymousMay 4, 2013 at 8:56 AMhttp://www.huaweidevice.com/cn/downloadCenter.do?method=toDownloadFile&flay=software&softid=NDIyNDE= ဒေါင်းလို့မရဘူးဗျ ကူညီပေးပါဦးဗျာReplyDeleteAnonymousMay 13, 2013 at 12:11 AMgalaxy grand firmware ကdown မရလို့ပါReplyDeleteAdd commentLoad more...